အနောက်တိုင်း စားသောက်ဆိုင်မှာ စမတ်ကျကျ ဘယ်လိုစားကြမလဲ။ - ဒိုးမယ်
အစားအစာတွေကို ဘယ်လို စတိုင်ကျကျနဲ့ စားသုံးရမလဲဆိုတာ အခုခေတ်မှာ ပိုမို အရေးကြီးလာပါတယ်။ အလုပ်အင်တာဗျူးတွေ၊ မိတ်ဆုံစားပွဲတွေနှင့် ညစာစားပွဲတွေ အများစုကို စားသောက်ဆိုင်တော်တော်များများမှာ ပြုလုပ်ဆွေးနွေးလာကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အနောက်တိုင်း စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ပိုမို ပြုလုပ်လာကြတာကြောင့် အနောက်တိုင်းအစားအစာတွေကို စတိုင်ကျကျ ဟန်ပါပါ နှင့် လူအများကြားမှာ စားတတ်ဖို့ကလည်း အရမ်းကို အရေးကြီးလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနောက်တိုင်း စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ မိတ်ဆုံစားပွဲတွေ ရှိလာခဲ့ရင် စတိုင် ကျကျ ဘယ်လို စားရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး ကို ‘Doemal ” ကမျှဝေ ပေးချင်ပါတယ်။
ကွဲပြားသော လူမျိုးစု၊ မတူညီသော အခြေအနေများမှာ လိုက်နာရမယ့် ယဉ်ကျေးမှု အပြုအမူ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ ရှိကြစမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်တိုင်း စားသောက်ဆိုင်များမှာ အတူမိတ်ဆုံ စားသုံးတဲ့အခါ မိတ်ဆုံ စားပွဲမှာ ပါဝင်တဲ့ လူအားလုံး မစုံ မချင်း အစားအစာ များကို မိမိ သဘောနှင့် စပြီး မစားသင့်ပါဘူးနော်။ ဒါ့အပြင် အိမ်ရှင် ဒါမှမဟုတ် ညစာစားပွဲကို ဦးစီး ဦးဆောင်သူက ဇွန်းနှင့် ခက်ရင်း စတင်ကိုင်ပြီး မစားမချင်း စောင့်စားသင့်ပါတယ်။
လက်သုတ်ပု ဝါ ကို ဘယ်မှာထားရမလဲ။
အနောက်တိုင်း စားသောက်ဆိုင်များမှာ ညစာစားပွဲတွေကို ဆင်နွဲတဲ့ အခါမှာ လက်သုတ်ပု ဝါ ဖြူဖြူလေးတွေကို ညစာ စားပွဲပေါ်မှာ မြင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီ လက်သုတ်ပု ဝါ ဖြူဖြူလေးတွေကိုတော့ အစားအစာ သုံးဆောင်နေစဉ် အတွင်း ပေါင်ပေါ်တွင်သာ ခင်းထားရပါမယ်။ အနောက်တိုင်း စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေမှာ တော့ စားပွဲထိုးများက လက်သုတ်ပုဝါ တွေကို သင့်အတွက် လာပြီး ခင်းပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ အစားအစာ သုံးဆောင်နေစဉ် အတွင်း အရေးကြီး ကိစ္စ တစ်ခုခုကြောင့် ညစာစားပွဲ မှ ခေတ္တ ထွက်ခွာပြီး ပြန်လည် စားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ လက်သုတ်ပု ဝါ ကို ထိုင်ခုံပေါ်မှာ တင်ထားလိုက်ပါ။ ဒီလို တင်လိုက်ခြင်းက သင်စားလို့ မပြီးသေးပဲ စားပွဲထိုးက သင့်ပန်းကန်ကို သိမ်းသွားခြင်း အဖြစ်ကနေ ကင်းဝေးစေမှာပါ။ ညစာ စားလို့ ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ လက်သုတ်ပုဝါ ကိုပန်းကန်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ထားပြီး သုံးဆောင် ပြီးပြီး ဖြစ်ကြောင်း ပြသနိုင်ပါတယ်။
ဇွန်း၊ ခက်ရင်းနှင့် ဓါးကို ဘယ်လိုကိုင်ရတာပါလိမ့်??
အနောက်တိုင်း စတိုင် ညစာ စားပွဲမှာတော့ အစားအစာ များကို စားသုံးရာတွင် ဓါးနှင့် ခက်ရင်းကို အဓိကထားကာ အစားအစာ များကို တစ်လုတ်စာ ပိုင်းဖြတ်ရန်နှုင့် လွယ်လွယ်ကူကူ စမတ်ကျကျ စားသုံးနိုင်စေဖို့အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ အမေရိကန်တွေရဲ့ ခက်ရင်းနှင့် ဓါး ကိုင်ပုံကတော့ ညာဘက်လက်မှာ ဓါးကိုင်ကာ ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့် ခက်ရင်းကို ကိုင်ကာ တစ်လုတ်စာ အတုံးလေးများလှီးကာ စားသောက်ကြပါတယ်။ ဇွန်းကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ညာဘက်လက်နဲ့သာ ကိုင်ပြီး အသုံးပြုရမှာပါ။
ဘယ်လို စမတ်ကျကျ စားရမလဲ??
အနောက်တိုင်း စတိုင်ညစာ စားပွဲမှာ ဟင်းပွဲတွေကို ယူပြီး သုံးဆောင်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ နာရီလက်တံ လည် တဲ့အတိုင်း အစားအစာများကို လက်ဆင့်ကမ်း ယူဆောင် တဲ့ နည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စားနေတဲ့ အချိန်အတွင်း အစားအစာ တစ်ခုယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ယူချင်တဲ့ အစားအစာ ရဲ့ အနီးဆုံးမှာ ရှိတဲ့ လူကို အကူညီတောင်းပြီး ယူဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ညစာစားပွဲမှာ အရေးကြီးဆုံးသော အချက်တစ်ချက်မှာ အစားစားနေစဉ်အတွင်း ပလုတ်ပလောင်း စကားမပြောသင့် ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် သင်စားသောက်နေစဉ်အတွင်းမှာ စကားလာပြောတယ်ဆိုရင်တော့ ပါးစပ်ထဲက စားနေတဲ့ အစားအစာ များကို အရင် ဝါးပြီးမှသာ ပြန်လည် ပြောကြားသင့်ပါတယ်။ ပူနေတဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးတဲ့ အခါမှာလည်း အေးအောင် ခဏလောက်စောင့်ပြီးမှသာ သုံးဆောင်သင့်ပါတယ်။ မြန်မြန်အေးအောင် လေနဲ့ မှုတ်ပြီး အအေးခံခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ညစာစားပွဲမှာ ပေါင်မုန့်တွေကို သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်လုတ်စာ အပိုင်းလေးတွေ ဖြတ်ပြီး ထောပတ်သုတ်ကာ စားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ လက်တွေကိုတော့ ညစာ စားပွဲပေါ်မှာသာထားသင့်ပါတယ်။ ပလုတ်ပလောင်း အသံမြည်အောင် စားခြင်းကတော့ လုံးဝကို ရှောင် ရှားသင့်တဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပြီးအခြားသူများ ညစာ စားနေစဉ် အတွင်းမှာ သွားကြားထိုးခြင်းကို ပြုလုပ်ခြင်းက တကယ်ကို ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ညစာစားပွဲက ဖန်ခွက်တွေကို ဘယ်လို သုံးရတာပါလဲ??
အနောက်တိုင်း စားသောက်ဆိုင်မှာ ယမကာဖြစ်ဖြစ်၊ ရေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖျော်ရည်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ညစာစားပွဲပေါ်က မတူညီ တဲ့ ဖန်ခွက်တွေရဲ့ အသုံးပြုပုံကို သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သောက်တဲ့ အဖျော်ယမကာ ပေါ်မူတည်ပြီး ဖန်ခွက်တွေရဲ့ အသုံးပြုမှုကလည်း ကွဲပြားလှပါတယ်။ ကိုင်းတံ ရှည်တဲ့ ဝိုင်ဖန်ခွက်ကိုတော့ ဝိုင်အဖြူသောက်သုံးရာမှာ အသုံးပြုပြီး အဝကျယ်ကျယ် ဝိုင်ဖန်ခွက်ကိုတော့ ဝိုင်နီသောက်ရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ ရေသောက်မယ်ဆိုရင်တော့ စားပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့ ရေသောက်ဖို့ထားတဲ့ ရိုးရိုးဖန်ခွက်ကို အသုံးပြုရမှာပါ။ ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်နဲ့ အဝကျဉ်းတဲ့ ခွက်တွေကိုတော့ ရှန်ပိန်သောက်ရာမှာအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကို သေချာလေးဖတ်ပြီး ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူနဲ့ပဲ ညစာ စားစား သင်က တကယ်ကို စမတ်ကျနေမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်စပ် အကြောင်းအရာများ >>စမတ်ကျကျ စားကြမယ်